Kaziranga Shillong Guwahati Package | Antsoy ny + 91-993.702.7574 ho an'ny famandrihana
Misy zavatra momba izany ny Atsinanana Avaratra izay manala ny fofon'ity olona rehetra ity. Izany dia mamaritra ny fitiavana amin'ny fomba tsy noeritreretinao, manome fiadanana sy fialan-tsasatra ny dikany samihafa. Ny Kaziranga Shillong Guwahati Package dia mitondra anao any amin'ny toerana izay ahafahanao manova ny traikefanao momba ny dia. Tsidiho ireo zava-mahagaga voajanahary ao Shillong sy ny Tempoly Kamakhya tokana ao Guwahati ary mandehandeha manerana ny kianja National Kaziranga malaza amin'ny tokotany tokana. Miparitaka amin'ny faritra 430 km, Kaziranga no valam-pirenena tranainy indrindra any Assam. Ny havoanan'i Karbi Anglong any atsimo sy ny Brahmaputra mahery any avaratra dia manome endrika mahatalanjona. Ny zaridaina dia ahitana zana-bozaka lava, bozaka, dobo misamboaravoara ary ala maina. Ny fitsidihana ny Kaziranga dia mahafinaritra sy mahavariana amin'ny safari-biby mampientam-po amin'ny alàlan'ny elefanta, fitsangantsanganana eo amin'ny Brahmaputra, ary ny fiaramanidina jeep. Ny Kaziranga Shillong Guwahati Package dia hanao karazana faran'ny herinandro anao ary hanome anao safidy maromaro hijerena. Guwahati dia Paradisa ho an'ny mpihary ny natiora ary hita ao amin'ny Bankin'ny reniranon'i Brahmaputra ao amin'ny fanjakan'i Assam, India. Ny toerana mahatalanjona any Himalayana sy ny fandosiran'ny rivodoza Brahmaputra dia hahatonga azy ho tsara tarehy sy mahafinaritra ny Tourism. Ny Kaziranga Shillong Guwahati Package dia manome làlana mahafinaritra sy fahafahana haka amin'ny hatsarana ny natiora. Fantaro ireo hatsaran-tarehin'i Shillong sy Guwahati, miaraka amin'ny Kaziranga National Park ary mahatsapa ireo faritra tsy fantatra any amin'ny faritra avaratratsinanana. Ny Kaziranga Shillong Guwahati Package dia hitondra anao mandritra ny androm-piainana iray manontolo.
Mivory ary miarahaba ny solontenantsika any amin'ny seranam-piaramanidina Fandefasana any amin'ny valan-javaboahary Kaziranga, tranon'ny "Rhinosocene tokana iray". Avy eo dia midira amin'ny hotely / Lodge / resort. Ny takariva malalaka amin'ny fialam-boly Mafana sy trano fialan-tsasatra any amin'ny hotely.
Mankalaza ny Elefanta handeha maraina hijery ny faritra atsinanan'ny Valan-javaboarin'i Kaziranga. Ankoatra ny Rhino, karazana hafa koa dia azo jerena tahaka ny serfa hogadra, lavenona, ombidia ombidia, elefanta ary raha vintana ianao dia avy eo koa ny tiger. Izy io koa dia tranon'ny gripa, sigara ary mpihaza satria misy vondron-drano marobe ao amin'ny Park. Hiverina any amin'ny toeram-pitsangatsanganana izahay. Ny Jeep Safari amin'ny Zoma afovoany amin'ny valam-pirenena. Ny hariva dia hiverina any amin'ny hotely. Mankalaza sy mijanona amin'ny trano fandraisam-bahiny.
DAY 03: PARK PARK KAZIRANGA - SHILLONG (270 KMS / 07 HOURS)
Rehefa vita ny sakafo maraina ho an'i Shillong, antsoina hoe 'Scotland of the East'. Mankanesa any amin'ny Farihin'i Umium, farihy majika lehibe sy havoana manodidina sylvan. Rehefa tonga eto Shillong ianao, midira amin'ny hotely. Ny hariva dia mitsidika ny tsena ao amin'ny Mall, niverina any amin'ny hotely. Mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny.
Aorian'ny fiara-misakafo maraina mankany Cherrapunjee, toerana mafana indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ny renirano mahafinaritra -Nohkalikai dia any Cherrapunjee. Azonao atao ihany koa ny mijery ny sasany amin'ireo lava-bato ao Cherrapunjee. Ny hariva niverina tany Shillong, nitsidika an'i Elephanta nianjera sy ny tampony Shillong tamin'ny fomba fijery mahavariana. Ny alina amin'ny hotely ao Shillong.
Rehefa vita ny famindrana sakafo maraina ho any Guwahati dia mankany amin'ny Cathedral Church, Lake Ward, Lady Hydrae Park. Tonga any Guwahati Jereo any amin'ny hotely. Ny fitsidihana hariva 'Kalakshetra', toerana iray ahitana ny tantaran'i Assamese sy ny kolontsaina amin'ny alalan'ny fampisehoana Light and Sound. Miverina any amin'ny hotely. Mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny.
Rehefa avy nitsidika ny Tempolin'i Kamakhya taorian'ny fandalovan'ny sakafo maraina ary nafindra tany amin'ny seranam-piaramanidin'i Guwahati.